I-Scorpio Horoscope: Umqondiso we-Scorpio Zodiac kunye nemihla yokuhambelana kwayo, iimpawu kunye neempawu - I-Scorpio
I-Scorpio Zodiac Sign Horoscope
Ulwazi lweScorpio ngeenkwenkwezi x
Umbala: Emfusa, Ebomvu
Ukuhambelana okukhulu ne: Umhlaza, iiPisces
Iqabane eligqwesileyo loMtshato kunye neNtsebenziswano: Taurus
Amanani ethamsanqa: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90
Isikhundla sokuzalwa: Oktobha 23-Novemba 21
Amandla: Wit, isibindi, inkanuko, ngumhlobo olungileyo
Ubuthathaka: abangathembiyo, abanomona, abagciniweyo, abanogonyamelo
U-Aries uyathanda: Inyaniso, ukulunga, ubuhlobo obuhlala buhleli, ukuqhula, uthando olukhulu
U-Aries akathandi: Ukunganyaniseki, ukutyhila iimfihlo, abantu abangenzi nto
Abo bazalwa phantsi komqondiso weScorpio bangabantu abanomdla kunye nabanamandla. Bazimisele kwaye bathatha isigqibo, kwaye baya kuphanda bade bayifumane inyaniso. I-Scorpio yinkokeli enkulu, isoloko iphezulu kwimeko kunye nengqiqo eveleleyo. I-Scorpio luphawu lwaManzi, kwaye baphilela ukuva kunye nokuvakalisa iimvakalelo zabo.Nangona iimvakalelo zibaluleke kakhulu kwiScorpio, zivakalisa ngokwahlukileyo xa zithelekiswa nezinye iimpawu zaManzi. Kwimeko nayiphi na into, unokuqiniseka ukuba iScorpio iya kugcina iimfihlo zakho, nokuba yintoni na.
Sagittarius Uthando kunye nesondo
I-Scorpio lolona phawu luchukumisayo lwezodiac. I-Scorpios inomdla kakhulu kwaye ukusondelana kubaluleke kakhulu kubo. Bafuna amaqabane akrelekrele nanyanisekileyo. Xa sele bethandana, bazinikele kwaye bathembekile. Nangona kunjalo, baqala ubudlelwane babo ngononophelo, kuba ngamanye amaxesha bafuna ixesha elininzi lokuthemba nokuhlonela amaqabane abo.
Sagittarius Abahlobo kunye noSapho
Ukunyaniseka kunye nobulungisa zimbini iimpawu ezenza iScorpio ibe ngumhlobo omkhulu. Abantu abazalwa phantsi komqondiso weScorpio bazinikele kakhulu kwaye banyanisekile xa kuziwa emsebenzini. Bakhawuleza kwaye bahlakaniphile, yingakho baya kuziva bengcono kwinkampani yabantu abanobuqili nabathanda ukuzonwabisa. Bazele izinto ezimangalisayo kwaye baya kukunika yonke into oyifunayo, kodwa ukuba ubaphoxa kube kanye, akuyi kubakho kubuya umva. I-Scorpios ivakalelwa kakhulu, xa bebandezeleka, akunakwenzeka ukuba bazive bengcono. Bazinikele kakhulu kwaye bazinyamekela kakuhle iintsapho zabo.
Umsebenzi weSagittarius kunye nemali
Ooscorpio ngabalawuli abagqwesileyo, abadali, kunye nabasombululi beengxaki. Xa i-Scorpio ibeka injongo, akukho nto imnqandayo. Basebenza kakuhle kakhulu ekusombululeni imisebenzi efuna indlela yenzululwazi. Ukukwazi kwabo ukugxila ngokuzimisela kubenza babe ngabaphathi abalungileyo kakhulu. Abaze badibanise ishishini kunye nobuhlobo.
Imisebenzi efana nezazinzulu, oogqirha, abaphandi, oomatiloshe, abacuphi, amapolisa, abaphathi kunye neengcali zengqondo zifanelekile kakhulu kulo mqondiso onamandla we-zodiac. I-Scorpio iyabahlonipha abanye, yingakho balindele ukuhlonishwa. I-Scorpios iqeqeshe ngokwaneleyo ukuba ibambelele kuhlahlo lwabiwo-mali lwabo, kodwa ayikoyiki umsebenzi onzima ukuqinisekisa imeko yemali engcono. Noko ke, abatyekelanga ekuchitheni imali eninzi. Imali ithetha unqabiseko nemvakalelo yokulawula kubo, nto leyo ethetha ukuba banobuchule bokulondoloza imali baze benze izigqibo ngenyameko ngaphambi kokuba benze naluphi na utyalo-mali.
Indlela yokutsala indoda yeSagittarius
Ukutsala indoda yeScorpio akukho lula. Amadoda angamaScorpio ayadinwa, azithembile, abukhali, anesondo, kwaye akhuphisana kakhulu. Ezinye zeempawu ezingathandekiyo zeScorpio kukuba bathanda kakhulu, banyanzelekile kwaye bangabantu abanomona kakhulu. Ukuhenda indoda yeScorpio, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ugcina umoya oyimfihlakalo ojikeleze kuwe. Imidlalo yinto etsala amadoda azalwe phantsi kophawu lokuvumisa ngeenkwenkwezi iScorpio, okuthetha ukuba kuya kufuneka usebenze ukuze ubagcine benomdla.
Kwindoda yeScorpio, imalunga nomceli mngeni kwaye ubambe into ethile, ke musa ukuhamba lula kuye kwaye udlale nzima ukufumana. Ukunyaniseka nokunyamekela ngalo mqondiso kubaluleke kakhulu. Batsaleleka kubafazi abazithembileyo nabadlala ngothando. Noko ke, kuya kuba ngaphezu komtsalane nje womzimba oya kukwenza ufikelele kwinqanaba apho unokumlukuhla khona. Ukwanesidingo sokutsaleleka ngokweemvakalelo, njengoko enye yezona mpawu zibalulekileyo zeScorpio kukuba ungoyena mqondiso uziva kakhulu wezodiac. Unqwenela amava ngesondo ehamba ngaphaya kokulinganiselwa ngokomzimba, ngoko ke ukuba ufuna ukumkhohlisa, tyhila umphefumlo wakho. Ungaze uzame ukulawula indoda yeScorpio njengoko kufuneka ilawule ngamaxesha onke.
Indlela yokutsala umfazi weSagittarius
Ubuntu beScorpio bunomdla kwaye buyinkimbinkimbi ngaxeshanye. Umfazi weScorpio ugcinwe, unomtsalane, unozibuthe, kodwa unokubonakala ekude kwaye ezolile. Umfazi weScorpio unobubele obukhulu kunye nomnqweno onamandla wokwenza okulungileyo kwihlabathi.
Ukuba ufuna ukumrhwebesha, kuya kufuneka ube nomonde kwaye ukulungele ukumvumela ukuba alawule ubudlelwane. Yiba ngumphulaphuli olungileyo kwaye unikele ingqalelo epheleleyo xa ethetha.
Ukuthandana nomfazi weScorpio kunokuba mnandi kakhulu, kodwa ungavumeli icala lakhe lasendle likukhohlise ekucingeni ukuba uya kuba yinto elula. Musa ukulindela ukudibana ngokwesondo kunye nomfazi weScorpio ngomhla wokuqala. Ukuphumelela uthando lwakhe kuthatha ixesha elininzi kunye nomonde, kodwa xa sele ethandana, unika yonke into kubudlelwane babo. Umfazi ozelwe phantsi kophawu lwe-zodiac Scorpio unokuba nobutyebi kakhulu, kodwa unokuba liqabane elizinikele ngokupheleleyo. Nyaniseka kwaye uphephe ukuxambulisana naye, kuba akalohlobo lokuxolela nokulibala ngokulula.
Umfazi ozelwe phantsi komqondiso we-zodiac Scorpio unomdla, ngoko ukuze umgcine evuya, kuya kufuneka ufumane iindlela ezintsha zokwanelisa umdla wakhe. Ukuba unokumvumela ukuba agcine ikratshi lakhe, uya kukuhlonela ngenxa yoko kwaye athandane nawe ngokukhawuleza.
Iimpawu ezihambelanayo ekufuneka ziqwalaselwe yiScorpio: Umhlaza , Virgo , Capricorn , intlanzi
Capricorn Khetha Uphawu Ngena Itaurus Aries